အဲသံလွင် လေကြောင်းလိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ် ပျံသန်းပြေးဆွဲ - Logistics Guide
Yangon Airways ကို အမည်ပြောင်းထားသော Air Thanlwin လေကြောင်းလိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ပျံသန်းခြင်း အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal-3 တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
"Air Thanlwin လေကြောင်းလိုင်းက Yangon Airways ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ Yangon Airways ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပျံသန်းခဲ့ရာ Safety ပိုင်းဆိုင်ရာ Accident/ Incident အနည်းဆုံးနဲ့ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ သလို Service ပိုင်းမှာလည်း ခရီးသည်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်အောင် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်"ဟုAir ThanlwinLimited မှ General Manager ဦးသုတဆွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Air Thanlwin လေကြောင်းလိုင်း ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်များမှာ လေးခုရှိပြီး ရန်ကုန်-စစ်တွေ-ရန်ကုန်၊ရန်ကုန်-မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး-ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်-လားရှိုး- တာချီလိတ်-ဟဲဟိုး-ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်-ညောင်ဦး-ရန်ကုန်တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
>>>> Mandalay Airport Information <<<<
"Air Thanlwin လေကြောင်းလိုင်း အနေနဲ့ပွင့်လင်းရာသီမှစပြီး ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေကို ATR 72လေယာဉ်လေးစင်းနဲ့အတူ Safe Wing to Fly ဆိုတဲ့Slogan နဲ့အညီ ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်"ဟုAir Thanlwin Limited မှ General Manager ဦးသုတဆွေက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားတွင် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်အောင်၊ Yangon Aerodrome Co.,Ltd. မှ CEO Mr.Ho Chee Tong တို့အား အထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း စသည့်အစီအစဉ်များဖြင့် ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲသံလှငျ လကွေောငျးလိုငျး စတငျဖှငျ့လှဈ ပြံသနျးပွေးဆှဲ
Yangon Airways ကို အမညျပွောငျးထားသော Air Thanlwin လကွေောငျးလိုငျး စတငျဖှငျ့လှဈပြံသနျးခွငျး အခမျးအနားကို အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ နံနကျပိုငျးက ရနျကုနျအပွညျ ပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ Terminal-3 တှငျ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
"Air Thanlwin လကွေောငျးလိုငျးက Yangon Airways ရဲ့ မြိုးဆကျသဈဖွဈတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍမှာ တညျရှိနပေါတယျ။ Yangon Airways ကို ၁၉၉၆ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျမှာ စတငျဖှငျ့လှဈပြံသနျးခဲ့ရာ Safety ပိုငျးဆိုငျရာ Accident/ Incident အနညျးဆုံးနဲ့ ပြံသနျးနိုငျခဲ့ သလို Service ပိုငျးမှာလညျး ခရီးသညျမြား အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ သှားလာနိုငျအောငျ အစှမျးကုနျဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ"ဟုAir ThanlwinLimited မှ General Manager ဦးသုတဆှကေပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Air Thanlwin လကွေောငျးလိုငျး ပွေးဆှဲမညျ့ခရီးစဉျမြားမှာ လေးခုရှိပွီး ရနျကုနျ-စဈတှေ-ရနျကုနျ၊ရနျကုနျ-မန်တလေး-မွဈကွီးနား-မန်တလေး-ရနျကုနျ၊ ရနျကုနျ-လားရှိုး- တာခြီလိတျ-ဟဲဟိုး-ရနျကုနျ၊ ရနျကုနျ-ညောငျဦး-ရနျကုနျတို့ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
>>>> Yangon Airport Information <<<<
"Air Thanlwin လကွေောငျးလိုငျး အနနေဲ့ပှငျ့လငျးရာသီမှစပွီး ပွညျတှငျးခရီးစဉျတှကေို ATR 72လယောဉျလေးစငျးနဲ့အတူ Safe Wing to Fly ဆိုတဲ့Slogan နဲ့အညီ ပြံသနျးပွေးဆှဲသှားမှာဖွဈပါတယျ"ဟုAir Thanlwin Limited မှ General Manager ဦးသုတဆှကေ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အခမျးအနားတှငျ လကွေောငျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကြျောစိုး၊ ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးရဲထှဋျအောငျ၊ Yangon Aerodrome Co.,Ltd. မှ CEO Mr.Ho Chee Tong တို့အား အထိမျးအမှတျလကျဆောငျပစ်စညျးမြားပေးအပျခွငျး၊ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျကူးခွငျး စသညျ့အစီအစဉျမြားဖွငျ့ ထညျ့သှငျးကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
Temporary Measures To Prevent Importation of Covid-19 to Myanmar Through Air Travel ၏သကျရောကျမှုကာလတိုးမွှငျ့သတျမှတျ